कोरोनाले रोकेको देउसी भैलो दुई वर्षपछि ब्युतिँदै राती ८ बजे सम्म मात्र खेल्न पाइने - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कोरोनाले रोकेको देउसी भैलो दुई वर्षपछि ब्युतिँदै राती ८ बजे सम्म मात्र खेल्न पाइने
कोरोनाका कारण यस अघिको वर्ष तिहारमा देउसी भैलो खेल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगायो । कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिएका कारण मानिस जमघट र भेला हुन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रतिकूल रह्यो ।
यस पटकको तिहारमा भने देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले कोभिड १९ को संक्रमण अझै नघटेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ ।
तिहारमा समुह, टोल बिभिन्न संघ संस्थाहरु घरघरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन छ । राति अबेरसम्म नाचगान गरेर देउसी भैलो खेलिने भएपनि कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले धेरै भिडभाड नगरी गोरखा जिल्ला भर बेलुकी ८ बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न प्रशासनले समय तोकेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले सुचना जारी गर्दै चाडबाडका बेला हुने जमघट, तिहारको देउसी भैलो जस्ता कार्यक्रममा गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनेका छन् । ‘पटक अतासबाजी, भँुईचम्पा जस्ता प्रज्वलनशील प्रदार्थ प्रयोग नगर्न साथै त्यस्ता पदार्थको बिक्री, ओसापोसार नगर्न अनुरोध छ’, सहायक प्रजिअ भण्डारीद्वारा जारी सुचनामा भनिएको छ । कानुन बिपरीतका क्रियाकलाप गर्ने गराउनेलाई कारवाही गरिने उनले बताए ।
मादक पदार्थ सेवन गरी शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने काम गरेको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । गुम्बा, मठ, मन्दिर लगायत स्थानमा पनि अत्याधिक भिडभाड नगर्न, आलोपालो पुजापाठ गर्न प्रशासनले भक्तजनहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।